प्रेमीकासगँको डेटिङ स्मरणीय बनाउन चाहानुहुन्छ ? |
२०७७ कार्तिक ११ गते, मंगलवार
प्रेमीकासगँको डेटिङ स्मरणीय बनाउन चाहानुहुन्छ ?
On: २०७६ असार ९ गते, सोमबार, ०५:२४ बजे प्रकाशित
काठमाण्डौ । हप्ताको ६ दिनसम्म काममा व्यस्त हुने कर्मचारी, व्यवसायी, विद्यार्थीका लागि शनिबार विशेष दिन । सरकारी कार्यालय तथा अधिकांश निजी क्षेत्रमा पनि शनिबार बिदा दिइने भएकाले यो दिन पारिवारिक जमघटको दिनका रुपमा लिइन्छ ।
शहरको व्यस्ततामा दैनिकी गुजार्नेहरुले शनिबारलाई घुमघामको दिनका रुपमा बुझ्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि युवा पुस्ताका लागि बिदाको दिन अझै विशेष बनेर आउँछ । आफूले मन पराएको व्यक्तिसँग नयाँ ठाउँमा घुम्न गएर मनका कुरा व्यक्त गर्दा आउने आनन्द नै बेग्लै हुन्छ । यसरी तपाई आफ्नो सपना आफैंले मन पराएको व्यक्तिसँग भेटेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो क्षण तपाईंका लागि अझै विशेष बन्छ ।
यदि तपाईं आफूलाई मनपरेको मानिससँग पहिलो पटक भेट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, यो भेटलाई स्मरणीय बनाउनुपर्छ । त्यसैले पहिलो भेटमा भेटिने मानिससँग लामो सम्बन्ध राख्ने वा नराख्नेबारे निक्र्यौल गर्दै तपाई पहिलो भेट महत्वपुर्ण बनाउन जरुरी छ । त्यो भेटलाई प्रिय बनाउन यि उपाय अपनाउनुहोसः
अति आवश्यक बाहेक फोन नउटाउनुसः यदी तपाईं पहिलो डेटमा हुनुहुन्छ भने तपाईंको मोवाइल साइलेन्ट मोडमा राख्नुहोस् । तपाईंले कुरा गरिहेको बेला फोन आएमा हतपत्त फोन नउठाउनुस् । अति आवश्यक फोन भएमात्र म कुरा गर्छु है भनेर फोन उठाउनुहोस् ।
बहस वा विवाद नगर्नुहोसः डेटमा हुदाँ एकआपसमा भएका कुरामा मात्र ध्यान दिनुहोस् । एकअर्काको कुरा राम्ररी सुनियोस् भन्नेमा विशेष ध्यान र्पुयाउनु आवश्यक छ । विवाद हुने कुनैपनि बहस हुनासाथ त्यसमा गम्भिर नहुनुहोस् । सकेसम्म विवाद हुनसक्ने विषय ननिकाल्नुहोस् ।
यसअघिका प्रेमका बिषयमा कुरा नगर्नुहोसः यदि तपाईं यसअघि प्रेममा हुनुहन्थ्यो भने त्यो विषयमा प्रवेश गर्दै नर्गनुहोस् । पहिलो भेटमा अगाडिका प्रेमका विषयमा कुरा गर्नुहुदैन । यसले तपाईलाई भेट्न आउनेलाई मानिसलाई नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यदि पूर्वप्रेमका बारेमा सोधिए पनि साधारण जवाफमा पन्छाउनुहोस् ।
अन्य सम्बन्धित समाचार: बुटवलमा दुई कोरोना संक्रमितको मृत्यु
पहिरनमा बिषेश ध्यान दिनुहोसः यदि कसैसँग पहिलो पटक भेट्दै हुनुहुन्छ भने आफुले लगाउने पहिरनमा विषेश ध्यान दिनुपर्छ । राम्रो पहिरनले भेट सुन्दर हुने मात्र होइन, ब्यक्तित्वमा समेत निखार ल्याउँछ । तर, नयाँ किनेको पहिरन पहिलोपटक भने लगाउनु हुँदैन । किनकी नयाँ लुगाले तपाईंलाई सहज नबनाउन सक्छ ।
बढी नबोल्नुहोस केही मानिसलाई पहिलो भेटमा आफू निकै जान्ने छु भनेर देखाउने वा कुराकानी गर्ने बानी हुन्छ । तर, पहिलो डेटमा कहिल्यै पनि चाहिने भन्दा बढि बोल्नु हुँदैन । यसले तपाईलाई भेट्ने मानिसको मनमा तपाईंको अत्यधिक बोल्ने बानिले तपाईंप्रतिको लगाव घट्न सक्छ ।
धुम्रपान वा मादक पदार्थ सेवन नर्गनुहोसः पहिलो भेटमा कहिल्यै पनि धुम्रपान वा मदिरा सेवन गरेर जानु हुँदैन । आफुलाई सहजता हुने नाममा अनावश्यक गन्ध आउने कुनैपनि कुराको सेवन वा प्रयोग गर्नुहुँदैन । यहाँसम्मकी बडि स्प्रे वा परफ्युमसमेत धेरै मात्रामा प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
तोकिएको समय भन्दा ढिलोरचाँडो हुनुहुँदैनः सकेसम्म पहिलो भेटमा तोकिएकै समयमा भेट हुन आवश्यक छ । समय भन्दा छिटो पुग्नु पनि हानिकारक हुनसक्छ । घण्टौं कुरेर आफु भेटका लागि आतुर छु भन्ने भान नर्पानुहोस् । यदी कारणवश ढिलो हुनुभयो भने त्यसबारे समयमा नै जानकारी गराउनुहोस् ।
छुन वा चुम्बन गर्न नखोज्नुहोसः प्रायः मानिसहरु पहिलो भेटमा प्रेम देखाउनका लागि चुम्बन गर्ने गर्छन्। तर, पहिलो भेटमा चुम्बन आवश्यक हुँदैन । बसाइका क्रममा पनि छुनु वा अंकमालमा बस्ने कामसमेत नगर्नुस् । यस्तो बानीले पहिलो भेट नै अन्तिम भेट पनि बन्न सक्छ ।
अन्य सम्बन्धित समाचार: २४ घण्टामा २ हजार ८५६ संक्रमित थपिए: ३ हजार ३३६ जना घर फर्के
खर्च बराबर गर्नुसः पहिलो भेटमा सकेसम्म खानपान, यात्रा वा सहजताका नाममा धेरै खर्च गर्नुहुँदैन । सकेसम्म कम खर्च गर्नुपर्छ । यसको मतलब यो पनि होइन कि आवश्यकता अनुसार खर्च नगर्ने । तर खर्च सामान्यभन्दा बढि भएमा डेटमा आएका दुबैले केहि हदसम्म खर्चमा साझेदारी अपनाउनुपर्छ ।
महिलालाई विशेष सुझावः सुन्दर देखिनु डेटिङको पहिलो र आवश्यक पक्ष हो। तर, हेभी मेकअप भने गर्नुहुँदैन । आखाँमा सामान्य गाजल, लाइट लिपस्टिक र छालाको रंगसँग मिल्दो मेकअप गर्नुपर्छ । यदि आँखा ठुला र सुन्दर छ भने त्यसलाई धेरै सिर्गान आवश्यक हुँदैन । ओठ र गाला आकर्षक छ भने तिनलाई हाइलाइट गर्नुपर्छ । मस्कारा लगाउन बिर्सनु हुँदैन। मुहार एवं व्यक्तित्व सुहाउँदो हेयर स्टाइल बनाउनुपर्छ। धेरै कसिलो वा खुकुलो पहिरन लगाउनु हुँदैन। साधारण गहनाको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
पुरुषका लागि विशेष सुझावः पुरुषले थोरै पहिरनमा आफुलाई राम्रो र आकर्षक बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । सुहाउँदो स्टाइलमा दारिजुंगा काट्नु वा मिलाउनु पर्छ । सफा र सुहाउँदो कपडा, जुत्ता, बेल्ट, घडिको प्रयोग गर्नुपर्छ। तर, घडि पटकपकट हेर्नु भने हुँदैन । चलेको स्टाइल अनुसारको राम्रो र सुहाउँदो कपाल बनाउनुपर्छ । गोजी पुक्क हुनेगरी धेरै सामाग्रि राख्नुहुदैन । पहिलो भेट तपाईको उत्तम होस् । तपाईले बल्लबल्ल मिलाएको समयलाई सही सदुपयोग गर्नुहोस् ।
२०७६ असार ९ गते, सोमबार, ०५:२४ बजे प्रकाशित
बुटवलमा दुई कोरोना संक्रमितको मृत्यु
खोटाङ जिप दुर्घटनामा तीनको मृत्यु
सप्तरीमा मोटरसाइकल दुर्घटना: दुई जनाको मृत्यु
भारतीय सेना प्रमुख नरभाने कात्तिक १९ मा काठमाडौँ आउने
पाकिस्तानमा बम विष्फोटमा सातको मृत्यु
युवती जिस्क्याएपछि दाङमा झडप, सात घाइते
बुटवलमा कोरोनाबाट दुईको मृत्यु
सप्तरीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा दुईको मृत्यु
चन्द्रमाको सतहमा भेटियो पानी
नवलपरासीमा पुजारीको हत्या
कलाकार मनोज गजुरेललाई कोरोना
गुल्मीमा जुवा खेल्दै गरेका वडाध्यक्षसहित १२ पक्राउ
यस्तो छ आईपीएलको प्ले अफ पछिको खेल तालिका
कोरोना अपडेट: नेपालमा सङ्क्रमितको संख्या १ लाख ६० हजार आसपास
आईपीएलमा आज पन्जाबलाई कोलकातासँग बदला लिने सुनाैलो अवसर
प्युठान: भतिजाले बाँदर धपाउन हानेको गोली लागेर काकाको ज्यान गयो
चीन: एक लक्षणरहित संक्रमित भेटिए, ४७ लाखको परीक्षण गरिँदै
तनहुँका ५० वर्षीय पुरुषको कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु
प्रदेश सरकारले कोरोनाको नि:शुल्क उपचार गर्छ: मुख्यमन्त्री गुरुङ
प्रधानमन्त्रीले लगाए राष्ट्रपतिका हातबाट टीका
गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाबाट थप चारजनाको मृत्यु: २५२ संक्रमित थपिए